पुँजीवादको सङ्कट र समाधान - Janabato
“नफुट, एकजुट हौं” र “छलछाम र षड्यन्त्र नगर”
२०७७ चैत २४ गते मङ्गलबार १०:१७ मा प्रकाशित
४ दिन, १४ घन्टा, १३ मिनेट अगाडि
७८ जनाले हेरिएको
लाल बहादुर कुमाल
“असम्भव भन्ने शब्द पट्मुर्खहरूको दस्तावेजमा मात्र हुन्छ, बहादुरहरूको होइन ।” –बोनापार्ट
चैत २४, जनकपुर । हामी नेपालीहरु भनेको बहादुरहरू हौं । देशभक्त र क्रान्तिकारी हौं । यतिखेर नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी २ बर्ष लामो कठीन प्रतिबन्ध खेपेर खुल्ला राजनीतिमा आएको छ ।
समय बलवान् छ । यसका विभिन्न आयामहरु हुने गर्दछन् । दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था नमान्ने तर शान्तिपूर्ण राजनीतिद्धारा जनता प्रत्यक्ष जीवनमा प्रभाव पार्ने गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सूचना सन्चार जस्ता समस्या आजका मितिसम्म ज्यूँकात्यूँ रहेका छन् । यसलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले हल हुन्छ भने ठिक छ नि त ! भनेर वार्ता र सम्बादको माध्यमद्धारा वार्ताको टेबलमा बसेर हल गर्न खोजिएको छ ।
हामीलाई विश्वास छ कि यी जनताका आधारभुत समस्या यो राज्यले सम्बोधन गर्नेछ । अर्को शब्दमा हामीलाई शंका पनि छ । किनकी परिवर्तनका हरप्रहरमा पुँजीवादी व्यवस्थाका मालिकहरुले विगत २००७ साल, २०४६ साल, २०५२ देखि ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन माथी प्रहार गरेको छ, कुठाराघात गरेको छ, धोका दिएको छ । त्यसैले अगुल्टोले हानेको जनता बिजुलीबाट तर्केका छन् । किनकी नेपाली राजनीतिको प्रमुख समस्या भनेकै परनिर्भर राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था के हुने र नहुने ? भन्ने विषय न त नेपाली संसदीय राजनीतिज्ञको छ, न त नेपाली जनताको हातमा छ । बरू त्यसको उल्टो वैदेशिक मालिकहरुको हातमा त्यो अधिकार सुम्पेका छन् । विदेशीले जे चाहायो त्यो नेपालमा लागू गर्न नेपालका दलाल राजनीतिज्ञले आफ्नो कर्तव्य सम्झन्छन् र संसदीय दलहरु वैदेशिक साम्राज्यवादका कठपुतली दलालको रुपमा देखिने अनुहार हुँदै आएका छन् । किनकी कसलाई सत्तामा ल्याउने र कसलाई फाल्ने ? भन्ने कुरा पनि विदेशी प्रभुकै हातमा हुने भएकोले उनीहरु इमान्दार डिउटी निभाउँछन् ।
नेपालको संविधान भन्दामाथि साम्राज्यवादको शासन छ भन्दा फरक पर्दैन । त्यसले हामीले भनेका छौं कि जबसम्म दलाल पुँजीवादी व्यवस्था चलिरहन्छ । यी अनगिन्ती हस्तक्षेपबाट नेपाल देश, नेपाली जनता मुक्ति हुने आधारहरु छैनन् । यी व्यवस्थाका बेकुफहरु जनताको आँखामा छारो हाल्न भ्रमको खेती गर्दै भन्छन् । उनीहरु जनता धनी भए देश त्यसै धनी बन्छ भन्ने तर्क अगाडि सार्छन् । जो एकदमै भ्रामक कुरा हो । किनकी यो व्यवस्थामा दलाली चाकडी गर्नु, लुट्नु र आफ्नो शक्ति संचय गर्नु बाहेक अर्को केही होइन । मुख्य कुरा त देश बलियो भए जनता धनी बन्छन् । यो सत्य कुरा हो ।
उदाहरणका लागि समाजवाद उन्मुख राष्ट्र र पुँजीवादी राष्ट्रको परीक्षा कोविड–१९ ले लिएको छ । जसको परिणाम बारम्बार पँुजीवादीकै संचार मिडियाले नै गरिरहेका छन् । पुँजीवाद कति निर्मम हुन्छ भन्ने कुराको साबित कोरोनाले देखाइदिएको छ भने समाजवादउन्मुख राष्ट्रहरु कति अनुशासित छन् ? भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । पुँजीवाद फेल र समाजवादउन्मुख समाज पास भएका छन् । त्यसैले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वैज्ञानिक समाजवादमा हाम्रो देश नेपाललाई लैजाने एजेन्डा पेश गरेको छ । जसको कार्यान्वयनका लागि हाम्रो पार्टी जनताको माझ हुर्किरहेको छ र नेतृत्व गरिरहेको छ । पुँजीवादी रणनीति “फुटाउ र राज गर, कमाउ र मोज गर” भन्ने भ्रम दिदै “घेराउ गर, सखाप पार” को रणनीतिमा छ हो भने हाम्रो पार्टीको रणनीति “नफुट, एकजुट हौं” र “देशलाई बलियो बनाऊँ, छलछाम र षड्यन्त्र नगर” भनिरहेको छ ।
अब तपाई नै भन्नुस् कि माथी उल्लेखित भनाईले देश बलियो बनाउने वा जनता धनी बनाउनको नाममा यी दलालहरुलाई राजा महाराजा रोज्ने वा बिदेशी दलालहरुलाई मोटाउने ? भन्ने कुरा यो परिस्थितिमा नेपाली जनताको हातमा समयले दिएको छ । त्यसैले आफ्नो भविष्यको फैसला आफै गर्ने बेला आएको छ । हामीले भाग्यको होइन, कर्मको फल खानुपर्छ ।
युवा संगठन नेपाल , परासीको विस्तारित बैठक सम्पन्न